Isalukazi (60) siboshelwe izinkomo zokwebiwa - Ilanga News
Home Izindaba Isalukazi (60) siboshelwe izinkomo zokwebiwa
Sibuye satholwa nezimbuzi eziwu-10 ezintshontshiwe ebezivalwe imilomo
USHAQWE ngamaphoyisa esemzini wakhe owesifazane osekhulile waseMakhukhula, KwaCeza, emuva kokubanjwa nemfuyo yokwebiwa, igcwele isibaya sakwakhe.
ILANGA lithole ukuthi uswele umgodi wokucasha, wakhala ngehlazo azongena kulona uNkk Zodwa Mthethwa (60), oficwe ngamaphoyisa nezinkomo eziwu-10 nezimbuzi eziwu-10 zokwebiwa.
Amaphoyisa afice izimbuzi ziboshwe umlomo ukwenzela ukuthi zingawubangi umsindo uma zikhala.
Imithombo yaleli phephandaba ithi uNkk Mthethwa uficwa nale mfuyo nje, endaweni waziwa ngokuthi ubuye ayidayisele amalungu omphakathi.
“Akusona isigameko sokuqala lesi lo mndeni ubanjwa nemfuyo yokwebiwa, uyaziwa ukuthi uyayintshontsha imfuyo yabantu ebese uyayidayisa. Umsolwa usebenzisana namanye amalungu
omndeni wakhe ukweba imfuyo yabantu, abayithatha bayoyivalela esibayeni sabo emuva kwalokho bayidayise,” kusho umthombo.
ILANGA likhulume noMnu Mzwakhe Kunene, ongumnikazi wezimbuzi ezitholwe emzini kaNkk Mthethwa, othe izimbuzi zakhe zalahleka emadlelweni ngoLwesithathu lwangesonto eledlule.
“Izimbuzi zami zalahleka ngezithuba zasekuseni abafana besanda kuzikhiphela emadlelweni. Ziwu-9 ezami neyodwa yakwamakhelwane, zonke beziluswa ngumuntu oyedwa.
“Sisola ukuthi amasela afika azilayisha emotweni ashaya achitha ngoba umuzi ezitholwe kuwona kuyibanga elide kakhulu uma usuka nasekhaya. Wumkhuba owejwayelekile lo wokwebiwa kwemfuyo kule ndawo yethu futhi bayaziwa abantu abagila le mikhuba.
“Into esilimazayo kule ndawo yethu wukuthi kasikho iSikebhe
okuyinhlangano elwa nokwebiwa kwemfuyo amalungu omphakathi kawasifuni ngoba edinwa wukuthi siyashaya, yingakho imfuyo yabantu intshontshwa emini kwabha, ilayishwe ezimotweni iyodayiswa,” kusho uMnu Kunene.
ILANGA lithole ukuthi amaphoyisa ancinzwe indlebe emuva kokubona isibaya sasemzini kaNkk Mthethwa sinyinyitheka yizinkomo njengoba bese kwaziwa ukuthi kunezinkomo nezimbuzi ezintshontshwe emadlelweni.
Kuthiwa uphenyo luwaholele emzini kaNkk Mthethwa okuthe uma ebuzwa ngale mfuyo, wahlu-leka wukuchaza, zamkhalela.
Okhulumela amaphoyisa KwaZulu-Natal, uCol Thembeka Mbhele, uthe uphiko lwamaphoyisa alwa nokwebiwa kwemfunto, iZululand Stock Theft, abophe owesifazane oficwe emzini wakhe nemfuyo yokwebiwa esibayeni.
Uthe umsolwa uvelile eNkantolo yeMantshi eVryheid, icala lakhe lahlehlela umhla ka-23 kwephezulu ukuba ayofaka isicelo sebheyili.
Previous articleINkatha “ibeke phambili abavoti” isebenzisana ne-ANC
Next articleUmqeqeshi wePirates ubalisa ngamabhadi